hal gacmeedka musqusha saxanka musqusha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya / WOWOW Qasabada Musqusha Qolka sare ee Chrome
Iyada oo ay xariiqyadeeda furfuran oo ay ku jiraan isku-habboon dhammaadka isku-dhejinta bullaacadda, qol-bulukeedka qubayska godka musqulaha ah uu wax weyn ku yahay meel kasta oo bannaan.
Waligaa ha noqoneynin qaababka qaabeynta: qasabad biyo xireed 2321501C oo ah muraayad u eg chrome end, naqshadeynta wax aan caadi aheyn oo aad u qurux badan, anaguna annaga noo gaar ah oo leh qaab-saddex-geesood ah oo qaas ah, abuuro musqushaada oo aad u fiican.
2321501C tilmaamaha rakibida
Qubeyska musqusha hal mar 2321501C
Ma waxaad raadinaysaa tubbada qolka musqusha ee casriga ah oo ka samaysan naxaas adag? Mar dambe ha eegin! WOWOW waxay sameysay suul gaar ah oo loogu tala galay musqusha, taas oo siin doonta qalooc qurux badan musqusha kasta. Naqshadeeyayaasha WOWOW waxay had iyo jeer raadinayaan qaabab cusub oo ay kuula xiriiri karaan khaasadaha musqusha. Qubeyska gaarka ah ee musqusha qolka musqusha ayaa leh naqshad gaar ah oo gogol dhaaf ah. Ma arki doontid naqshaddan meel kale oo xaqiiqdii waxaad iibsan doontaa tubbada qubayska oo nooc ka mid ah. Naqshaddan saddex-geeslaha ah ee ay Mareykanku leeyihiin waxay dib-u-habeyn ku sameynaysaa musqulaha caadiga ah ee musqusha oo dhan musqusha. Shaki la’aan!
Markaad dib-u-qaabaynayso ama aad naqshadeynaysid musqushaada cusub, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato tubooyinka qolkaaga musqusha. Badanaa tubooyinka qolka musqusha waxaa la xushaa dhamaadka mashruuca markii xadka miisaaniyaddu ay ku dhowdahay in la gaaro (ama xitaa laga gudbo). Xaaladdan oo kale, waa inaad iska ilaalisaa in naqshadda musqushaaga ay qatar ku jirto xulashooyinka xunxun ee ku saabsan tubada qolkaaga musqusha. WOWOW waxay si joogta ah u xaqiijineysaa in tubooyinka qubeyska ee tayada sare leh ay ku imaan karaan qiimo jaban. Oo weliba leh qaabe weyn oo ku daraya xarrago, xarrago, iyo / ama taabasho casri ah naqshadaha musqusha. WOWOW waxaan ku qanacsanahay inaan ku bixinno qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta aad heli karto.
Qolka musqusha qolka musqusha oo leh qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta
Tayada musqusha qolka musqusha ee WOWOW ayaan laqeexin. Qalabkeeda bir adag waxay bixiyaan cimri dherer dheer xagga waxqabadka sare. Taas waxaad ku ogaan doontaa markaad gacanta ku haysato suuliga weelka musqusha ee WOWOW. Kani waa horyaal kale marka la barbar dhigo tubooyinka biyaha ee rakhiis ah ee laga heli karo suuqa. WOWOW dhinaca kale waligeed kuma aysan darin aaladda waligeed, taas oo halis ugu jirta in ay tanaasul ku sameyso tayada tubooyinka musqulaha. Hadana, tuubada tubbada biyaha ee WOWOW ayaa ah mid la awoodi karo. Waxaan, sidaas darteed, waxaan oran karnaa inaadan ka heli doonin qiime wanaagsan oo lacag ah. Sidaas awgeed, waxaan ku siinaynaa dammaanad 90-maalmood ah oo lacag celin ah. Haddii aad ka heli lahayd tubbada qubayska musqusha oo qiime jaban, ama tubbada musqusha oo tayadoodu sarreyso isla qiimahaas, waxaan ku siin doonnaa kuu soo celin buuxda. Su’aalo la’aan ayaa la weydiiyay.
Astaamaha sare ee sare waxaay ka kooban yihiin biyo-badbaadin. Aoperl-kaan aadka u shaqeynaya wuxuu bixiyaa qulqulka biyaha jilicsan oo jilicsan oo raaxo leh. Uma baahnid inaad ka walwaleyso biyo ku daadashada. Faa'iidooyin dheeraad ah ayaa ah inaad ku badbaadin karto 50 boqolkiiba biyaha adoo adeegsanaya qaabkan cusub ee ku jira tubada tubada biyaha ee WOWOW. Waxaad awood u leedahay inaad si sahal ah uga saarto aodeeraha, adoo adeegsanaya (lagu daray) aaladda. Sidan ayaad u nadiifin kartaa aalaha si joogto ah, meeshana uga saari kara hadhaaga adag, si laguugu siiyo khibradda isticmaale ee ugu wanaagsan.
Tubbada musqusha oo aad loo tijaabiyay hal gacan
Waxyaabaha ka kooban tubada qolka musqusha kaliya ayaa la tijaabiyay dhowr jeer si ay kuugu soo bandhigaan waxqabadka ugu fiican. Mashiinka dhoobada dhoobada ah tusaale ahaan waxaa la tijaabiyey 500,000 jeer. Oo weliba, ka dib dhammaan tijaabooyinkaas oo dhan, tuulku wuxuu sii waday inuu si habsami leh usocdo, faleebo la'aan, iyo daadin la'aan. Celcelis ahaan qoysku waxay isticmaali karaan tubada musqusha wax kayar 10,000 jeer sanadkii. Tani waxay ka dhigan tahay inaad adeegsan lahayd tubbada qubayska keliya ee musqusha sanado badan, adigoon lumin waxqabadka fiicnayn.
WOWOW waxaan ku kalsoonahay tayada iyo waxqabadka suulkeena musqusha. Sidaas darteed, kama baqno inaan ku siino muddo dammaanad oo 3 sano ah. Haddii qolka fadhiga musqusha uusan sifiican u shaqeyn doonin muddadan seddexda sano ah, waxaan qolkaaga musqusha qubeyska ku beddeleynaa mid cusub. Sidan, waxaa lagaa hubiyaa waxqabadka joogtada ah ee tubbada qubayska musqusha. Masuuliyaddeena si dhab ah ayaan u qaadnaa waxaanan ku qaadanaynaa shaki la’aan. Maaha wax aan ahayn waxaan haysanaa koox si dhaqso leh u kobceysa oo macaamiil daacad ah oo ka socota adduunka oo dhan.
Qubayska musqusha ee ku habboon-saaxiibtinimada leh
Qulqulka biyaha iyo heerkulkiisa ayaa si fudud loogu xakamayn karaa gacanta keliya ee tubbada musqusha. Hal gacan ayaad ku maareyn kartaa heerkulka biyaha hal gacan, inta gacantaada kale ku mashquulsan tahay, tusaale ahaan markaad cadayaneyso ilkahaaga. Waxaad arki doontaa jilicsanaanta qalliinka isla markaaba markaad isticmaaleyso waalkaas tayo sare leh. Waxay noqon doontaa wax lagu farxo marwalba in lagu shaqeeyo gacantaan.
Qolka fadhiga musqusha ee chrome musqusha ee WOWOW wuxuu la imanayaa xirmooyin xawaare isugu jira oo buux-dhaaf ah. Daafad-sameeyahaan soo xulay wuxuu mid ka mid ah gacanta ku hayaa suuliga musqusha, si uu saameyn weyn xitaa ugu yeesho qurxinta jikadaada. Mashiinka mashiinka mashiinka ee lagu soo ridayo waxaa si sahlan loogu shaqeyn karaa hal war-saxaafadeed keliya. Kaliya waxay u baahan tahay a
xoogaa yar oo cadaadis ah oo lagu hawlgalo. Sababtoo ah naqshaddeeda wax ku oolka ah, waxay biyaha uga fogeyn kartaa musqusha musqusha dhaqso iyo aamusnaan.
Rakibida tubbada tubbada musqusha hal mar
Adeegsiga agabyada naxaasta ah ee adag, WOWOW waxay dammaanad qaadi kartaa biyo bilaash ah oo aan lahayn hogaan. Sidan, waxaad reerkaaga siin kartaa khibrad biyo ammaan ah mana aha inaad ka walwaasho tayada biyaha. Ugu yaraan ma ahan qolkaaga musqusha. Iyo cimri dhererkiisa awgood, tubada qolka musqusha ee WOWOW wuxuu dammaanad qaadi karaa waxqabadkaan sannado badan, sannado badan.
Muuqaalka ugu weyn ee qolka musqusha kaliya ee WOWOW waa inaad adigu iskaa u rakiban kartaa adigoon shaqaaleysiin tuubbarka. Qolka musqusha qolka musqusha ayaa waxaa loogu talagalay si ka duwan tubooyinka kale ee musqusha waxaana lagu rakibi karaa 30 daqiiqo gudahood. Xitaa markii aadan xirfadle ahayn. Qolka fadhiga musqusha ee WOWOW wuxuu la imanayaa xirmo buuxa oo leh dammaanad qaadidda rakibaadda habsami leh: saxan 4-inji ah (oo la mid ah labada musqusha ee 1-iyo 3-dalool oo la quustay), tuubbooyin bullaacad soo ridaya, 20-inji oo is-adkeyn kara tuubada biyaha ee Tucai oo leh tayo dammaanad leh, rakibidda galoofisyo, aalad ka saare aaladda, iyo in ka badan. Sidan, way fududahay in la sameeyo-adigu naftaada rakibidda tubada tubbada biyaha ee WOWOW.
Value Qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta
Operation Howlaha qumman ee socodka biyaha
Design Naqshad gaar ah oo xarrago leh
Materials Alaabooyin tayo sare leh
Ed Waxaa kujira xirmada naftaada oo iskiis u sameyso
SKU: 2321501C Categories: Qubeyska Musqusha, Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya Tags: dhammeystir nadiif ah, tubbada dharka lagu xiro, Hal gacan